Oromo News 04.07.2021 | KWIT
Dabalataan , officer akka deebisetti qawwen isaa fi qawween harka bara 2020 keessati yeroo 269 akka tae himan, kunis bara 2019 irraa persenti 83% dabalee akka jiru mullisa.
Department mana fayyaa Iowa akka gabaaseti guyyaa har’aa namni haarawa sababa Covid-19 kan due hin jiruu. Akka state guututtimmoo kan haarawa qabame 500 ol dhak unis dhukubsattoota baaye kan dabaleedha, hospitaala Sioux City lama keessati namni 18 yaalamu jira. Kunis lakkoofsa guyyaa kaleessatin tokkoma.
Jiraattoni Nebraska 120,000 ta’an torbaan darbe keessa talaali corona virus fudhatanii jiru, kunis torbaan sani duraa irraa nama 106,000 kan dabaleedha. State ammati nama umriin isaa 16 fi sanii ol taee hundaafu talaali corona virus akka fudhatu danda’niiif bane jira.
Local art naannicha magaala Sioux City dhaan qarqaarsa argatee jira. Council magaala Art SUX (Sioux) dhaaf guddinaafi assessment xinxaluu dhaaf murteesani jiran. Bakki inni itti argamuus gamoo Karlton’s kan 4th street irrati. Gamoon kunis bakka studio , art gallery fi bakka barumsaatif qophaahu jira.